Seenan Ijoolee Oromoo Habashootan dhokate Ijoolee Oromoon ifa ba’uu qaba.
Beektoon Seena, Median Oromoo fi gaazexesstoon Oromoo qabsa’oota jireenya Oromoo jijjiruuf qabsoo godhan fi Seena Ethiopia keessatti waan garii hojeetan seenan isaani media Adunyan ga’uu qaba. Ijoolen Oromoo qabsoo godhani darban lubun isaan Habashootan galafatamee, seenan isaan siirna Garboonfatan dhokfame ijoolen Oromoo ifa basuu qabu. Kun dirqama lamumatti. Gootoon kun waan garii isaan hojeetan, barreesine ykn Videon warabnee seena isaan dabarsun wara qabsoo irra jiran hamile jabessa, wara kana immoo qabsoof kakasa kaanafuu waan kana akka salphatti ilalalu hin qabnu. Dhalooti dhufu seena darbe irra barrate qabsoof of qoophesa. Kaanafuu beektoon seena, barreesitoon fi Median Oromoo ittigaafatamuma seena qabu.
Seena Warraqsa Ethiopia keessatti bakka ol’anaa kan qabuuf jijjirama siirna Garbuma kan diigan keessa Dr. Haile Fida seenan isaa hanga amma dhokatee jira. Kun doggogora gudadha, Habashoon seena ijoolee Oromoo ni dhoksuu uni immoo malif caliifna. Guyya Haraa Mandela kabaja akkasin yeroo yadatamu warii Mandela gargarani asin ga’aan J/Tadesse Birru, Kol. Fakadu Wakene, Kol. Guta Dinka goochaa seena qabessa raawwatan garuu siirna Haile Silase, Siirna Dargi fi Siirna wayyane keessatti kan irranfataman Oromoo waan ta’aanf. Kana enyuu ilee hin mormu. Seena Ethiopia keessatti bakka guda kan qaban Gobena Dace, F/Habte Goergis, Balcha Abba Nabso, Lij Iyasu, Yilma Dheersa, J/Mulugeta Buli, K/ Abdisa Aga, J/Teferi Banti, J/Damse Bulto, J/ Marid Nuguse, J/Ragasa Jimma, Dr. Haile Fida, Habasha amanan waliin hojeetan hundi isaa harka habashatii du'aan, seena Ethiopia keessatti bakka isaanf maluu hin argane. Qabsoo Uummata Oromoo Wallo keessatti bakka guda kan qabachuu malan Warqitu fi Mestawet seena irra haqamun isaan Oromoof waan falmatanf.
Seena barratoota Oromoo keessa siirna Garbonfata Abba lafa jijjiruu keessatti Qabsoo barratoota biyya keessa fi biyaa alati kan gaggesan Haile Fida, Baro Tumsa, Elemo Qiltu, Ibsa Gutama, Magarsa Bari, Lenco Lata, Abiyu Galata kkf dhiban lakawaman wa’ee isaan namni barreese hin jiru. Waraqisa Ethiopia sochoosun siirna garbonfata sana diguun isaan fi Afaan fi Addan Oromoo akka dubatamuu goochun Oromoo hanga tokko ifa argisisan jiru, akka nu ofi baru warii godhan kun daggatamu hin qaban. Dhalootti Waaraaqsa Ethiopia geggesan fi Oromoo jijjiruuf bu’uura nu ka’aan maqan isaan kana qoofa miti. Jijjiramun siirna Haila Silasee qabsoo nu Bilisummaf gaggesa jiru kanaf waan kara nu banef qabsa’oon kun siirna Ethiopia keessatti yoo hojeetan iyuu Ethiopiansti jeedhamun seenan isaan dhokachuu hin qabu. Siirna Habasha waan diiganf Habashoon seena jara kan dhaga’uu iyuu hin feedhani uni immoo seena isaan ifa basuu qabna.
Namoon seena beekan akka obbo Eda’oo Boru seena qabsoo bilisumma keessatti nu barrsisa turan, yeroo amma darggagoon Oromoof seena qabsa’oota keenya beeku qaban qoophesufi qabna. Qabsa’aan seena hin bekenee waan qabsa’uuf hin beeku, waan hojeetu irratti ilee abdi fi hamilee hin qabu, yoo seena hangafoota beeke fi kabaja lammin qabsa’oota isaaf qabuu yoo beeke hamilee qabata. Namoon baayen kun yeroo isaa miti jeechu dandeesu, garuu kun siiri miti, namoon hojii kana qoofa hojeetan jirachuu qabu. Uummati seena hin qabnee gara fulaa duratti deemuu hin danda’uu. Diini keenya Seena Tadesse Birru, Haile Fida, waqo Gutu, Jaaraa Abba Gadaa kkf. dhaga’uu hin barbadan diina isaan waan ta’aanf. Oromoon immoo seena qabsa’oota kana qoorate dhuga basuu qaba.
Goocha gootoota barreesu fi kabajuun qabsoo keenya ni arifachisa, hamilee qabsa’oota jabessa. Qabsoo keenya fulaa dura tarkanfachisa. Tokkuma keenya jabessa, wal nu barrsisa, Hamilee maatii qabsa’oota jabessa. Median Oromoo, Gaazexessoon Oromoo fi barreesitoon seena waan guddaatu isiin irraa egama. Yaaka diini Oromoo irratti hojeete saxiluu gootoota keenya seena isaan ibsuun nu irra egama. Eenyummaa fi seenan Oromoo ifa ba’uu kan danda’uu yoo bilisumma bane malee Habasha jala jirane wa’ee seena, addaa fi afaan Oromoo dubachuun rakkisa ta’ee jira. Gaafa bilisummaa banes ta’ee amma darggagoota Oromoo hamilee itti horuuf seenan qabsa’oota kara hunda barsifamu qaba. Namni hundi waan danda’uun yoo gumachee qabsoon bilisumma ni arifata.Qabsoon Oromoo yoo bakka ga’ee seenan dhokate kun hundi balinan barreefama.Bilisumaan waan hundaf murteesadha, sabi bilisummaa hin qabne seena hin qabu. Kaanafuu Tokkuman yoo qabsoofnee Uummata keenya salphina jala baafna.